NYI LYNN SECK 18+ DEN: 10.12.2007 Diary
Posted by NLS at 12/10/2007 12:47:00 PM
10 Responses to “10.12.2007 Diary”
" အများအကျိုး ရွက်သည်ပိုးက ၊ ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း ၊ မဖဲ့မစောင်း
ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို ၊ စိတ်ကောင်းနဲ့ယှဉ် ရှေးရှုနှင်လော့"
announcement ကိုဖတ်လိုက်ရလို့ ဘလော့ဂ်ပိတ်လိုက်တာ သိလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း messageတွေကြောင့် သူများတွေထင်သလို ထင်လိုက်မ်ိတယ်။ စိတ်များကုန်သွားသလားလို့ပါ။ ဒီလိုပါပဲ အံချှောမှုတွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်စိတ်ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာသိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
အခုလိုပြန်ပှေါလာတဲ့အတွက် ကိုညီလင်းဆက်ကို လေးစားပါတယ်၊ ကိုညီလင်းဆက်ဟာ ဗမာပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ တယောက် ဆိုတာကို လုံးလုံး ယုံကြည်ပါတယ်၊ ပြည်ပက bloggerတွေဟာလဲ ဗမာပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ တွေပါဘဲ၊ ကိုညီလင်းဆက် အမြင်နဲ့ သူတို့အမြင် မတူရင်ရင်လည်း သူတို့တွေ ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ ကိုညီလင်းဆက်လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်လိုကြောင့် မသင့်တှောဘူး၊ နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီး၊ ဆက်မလုပ်ဖို့ ဆွဲဆောင်သင့် ပါတယ်၊ ကိုညီလင်းဆက် လုပ်ခဲ့တာမှားတယ်လို့ ထင်လို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ိ ဝေဖန် ထောက်ပြ တာကို ကိုညီလင်းဆက်ကလဲ ဒေါသတကြီး ပြန်လဲတုံ့ပြန်မယ့် သူမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ဗျာ ဒေါသတကြီးနဲ့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ရန်ငါစည်းခွဲခြားရလောက်တဲ့ အထိတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ.. သူတို့တွေဟာ နိုင်ငံရေးကို တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ဆောင်ရွက်နေသူတွေဆို စည်းရုံးရေးကို တကယ်ဘဲ နားလည်သင့်တယ်၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ စည်းရုံးရေးပဲ၊စည်းရုံးရေးဟာ အသက်ပဲ၊ ပြည်သူကို စည်းရုံးရမယ်၊ နားမလည်သူကို နားလည်အောင် စည်းရုံးရမယ်၊ အမြင်မတူသူတွေကို လက်ခံလာအောင် စည်းရုံးရမယ်၊ အခုတော့ဗျာ လူတွေ ကျင့်သုံးနေတာကြီးက အမြင်မတူရင် ထချရေးကြီးဗျ၊ စိတ်ပျတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးဆိုတာ နအဖကို အပြစ်ပြောပြီး ဝိုင်းဆဲရေးကြီးလို ဖြစ်နေတယ်၊ နအဖမကောင်းတာတော့ ကလေးကအစ သိပါတယ်၊ ခက်တာက စည်းရုံးရေး.. အမြင်မတူသူတွေ ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကြတော့ ဘယ်သကောင့်သား နိုင်ငံရေးလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘိုးတှောမှ နားမလည်ဘူး။
:) warmly welcome back.
Native Flowers Lovers said...
ahh..What happened ?
People can say as they like. Who cares?
Go on, little monkey!
Eight August said...
Native Flowers Lovers မှာ Team member
Maung Maung Hla Win Ko Gyi Thu
Steven Alexander baganthar
mg myo aung ရွှေသွေးအောင်
Yan ကိုငယ် Aie Rot seikkyithar
နေဘုန်းလတ် TKG ktyeph mlv
NLS မေ Mr. Mandalay
nay tun (or) ko ko pandora
အထက်ပါ comment ဟာ team members
team members အားလုံးရဲ့
team members အားလုံးကိုလဲအသိမပေးဘူး
team members တွေ ရဲ့ အမြင်မဟုတ်ဖူးဆိုရင်တော့
ဒါ group account ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့
နိမ့်ရာစိုက်မဲ့ ဓါး လှံ များ ဟာ ထုံး စံ ပဲ..။
ဘလော့ဂ်ပုံစံအသစ်ပြောင်းလိုက်တော့ အရင်က ကွန်မန့်ဟောင်းတွေ အကုန် ပြန်ပါမလာတော့ဘူးနှော။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မေးကြည့်ရုံသက်သက်ပါပဲ။
I do value those comments not less than you.
As laymen know, this is blogger comment, mine is helloscan comment. So recently how can i be mixing up them. :)
မှန်တယ်ထင်ရင်ရှေ့ဆက်နှော၊ ဒီနိုင်ငံမှာမှန်တာတွေကို လုပ်ဖို့သိပ်ခဲယဉ်းနေတယ်။ လုပ်ခွင့်ရနေတာနည်းတဲ့အရည် အချင်းမှမဟုတ်တာ။ အဲသလိုလုပ်နိုင်ဖို့ အရည်အချင်းမရှိ တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရဘူး။ ဓာတ်ပုံက ကိုညီလင်းစက် ရဲ့ပုံလား။ မိုက်တယ်။